Darodar And Buttons For Website Spam - Chengetedza Bhizimisi Rako NeSemalt
Dhani yakachena uye yakarurama inonyanya kukosha kumabhizimusi eInternet. Kunyora kukosha kwevatsvaga webhu kunogona kukuunza mari chaiye kana zvasvika kune kugadzirwa kwezvinhu . Dzimwe nguva, zvinorwadza kubvuma kuti zvinopfuura 78% zvepaGoogle Analytics deta yako ine bot bot traffic uye mabhii e web site spam.
Alexander Peresunko, the Semalt Muteresi Achibudirira Mutengi, anotaura kuti Darodar uye mabhodhi ewebsite spam ndevamwe vasina kuziva kutsvaga injini nzira dzekugadzirisa dzakagadzirisa seniwe vaiti webhusaiti nekutengesa vashandi GA data. Ndicho chikonzero, Google Analytics inonyanya kukosha kune vadzidzisi vepanzvimbo, sezvo inobatsira vatengesi vekugadzira kuongorora data, uye kudzivisa kuita zvisarudzo zvisina kunaka zvebhizimisi - monitoring temperature computer.
Zvaunoda kuziva nezve web site spam
Darodar ndeimwe yenzira yekutsvaga injini yekutsvaga inokwevera magwagwa chaiwo uye vatengi kuongorora dhiyabhorosi. Nokuedza kutarisa pasi apo motokari inouya kubva, vadzidzisi vepawebhu vanoguma kugadzira mari chaiyo yevaspammeri, kwavanoendeswa kunzvimbo dzakaipa..Maererano neSeO pros, Darodar uye mabhodhi ewebsite spam zvinoshungurudza zvipikiso zvino zviri kuitika mumakambani eIndaneti uye webhusheni.
Zvinogona kuvhiringidza kuvhima yako kutaura nezvekubatana uye kuziva kuti kufamba kwako kunobva kune spammers. Kunze kwebhoti rekutengesa uye mabhatani ewebsite spam ndiyo danho rokutanga rokurinda.
Migumisiro yebhatani zvewebsite spam referrals pamigumo yako yeG GA
Dhiyabhorosi yeGoogle Analytics inokanganisa nehuta uye zvisingakoshi migwagwa inogona kunge yakaoma kunzwisisa uye kuongorora. A spammer inokwanisa kushandisa webhusaiti ye server yako mashizha nekuderedza kushanda kwesaiti yako. Vashandisi veInternet vave vachishandisa kushandisa teknolojia iyi kuti vaongorore mawebsite asingakwanisi kuvanetsa.
Nzira yekudzivirira sei mabhodhi ewebsite spam kubva pane skewing yako GA data
Mimwe mibvunzo yakasimudzirwa pamusoro pekutengesa kwebhoti, kufamba kwepamberi, uye mabhatani ewebsite spam pane data yepaiti. Maererano nenyanzvi dzebhizimisi, vatengesi vanogona kutungamirira nyore pakuderera kwebhizimusi rekutsvaga. Heano nhungamiro inobatsira iwe kusabvisa mabhodhi ewebsite kubva panzvimbo yako:
Vhura uye sarudza 'Admin Tab' yeG GA yako
Kushandura 'All Filters' icon uye tapota 'Shandisa New Filter'
Ita zita idzva rekutsvaga yako itsva
Sarudza 'Filter Types' uye sarudza predefined filter type sokusarudza kwako
Dzvanya 'Svina Firiji' icon uye uzadze nzvimbo ye spammer kuti ichanyorwa
Chengetedza firisi yehuyu uye uiise pawebsite yako. Yeuka kuchengetedza ruzivo rwako rwepakutanga pane yako huru yekuona firiji kuti urege kudzivisa ruzivo runokosha kana ukasabvisa spam.
Darodar, bot botani, mabhodhi ewebsite spam ndeimwe yepamusoro yekutsvaga injini yekugadzirisa zvinhu izvo zvave zvichinyora data yako. Kunyora zvisiri izvo nekusaverenga zvinyorwa zvinogona kukuita iwe kuita zvisarudzo zvisina kunaka maererano nebhizimisi rako rekuInternet. Kunzwisisa uye kuongorora dambudziko chinhu chakakosha chose chisingagoni kuchengetwa. Bvisa mabhokiti ewebsite spam uye mushumo usina kudiwa kuti uve nemari yakakwana yekuita mari.